इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कार क्षेत्र मा प्रवेश अर्थव्यवस्था वित्त
जोस रीसियो | | कम्पनीहरु, negocios
राष्ट्रिय इक्विटी बजारमा सूचीबद्ध कम्पनीहरूले देखाइरहेको एउटा नवीनता यो हो कि उनीहरूले विद्युतीय कारहरूको लागि उदीयमान बजारमा प्रवेश गरेका छन्। एक कारक जसले उनीहरूलाई उनीहरूको मूल्यको मूल्य निर्धारणमा थप मूल्य दिन सक्छ, यद्यपि मध्यम र दीर्घकालीनमा र छोटो अवधिमा अधिक। यी केहि कम्पनीहरूले हरी कारको तर्फ लिप बनाउन निर्णय गरेका छन् एन्डिसा र Iberrola, यद्यपि उनीहरूले यो रणनीति आफ्नो व्यवसाय लाइनमा सामेल गरेका छैनन्। जे भए पनि, आउने बर्षहरूमा यसलाई विचार गर्नु एक कारक हुनेछ।
इलेक्ट्रिक कारहरूले आफ्ना मोडेलहरू स्पेनिश सडकहरूमा थोरै र धेरै धम्की बिना थोपेको छ। यस बिंदुमा यो पहिले नै बढी वा कम सामान्य छ सवारीसाधन भेट्नुहोस् हाम्रो देशको मुख्य शहरहरूमा यी विशेष सुविधाहरूको। यस अर्थमा हामीले यो याद राख्नु पर्छ कि इलेक्ट्रिक कारहरू एक वास्तविकता हो जुन शहरमा हाम्रो यात्राहरूको लागि गणना गरिनु पर्दछ। यस किसिमको आक्रामक सवारी नहुन पनि ग्रहमा प्रदूषण बिरूद्ध लड्न धेरै नै मद्दत पुर्‍याउनुको साथ।
यस समयमा, का रेजिष्ट्रेसनहरू वाहनहरू स्पेनमा विद्युतीय सवारी वाहन (कार, चतुर्भुज, वाणिज्यिक र औद्योगिक सवारी साधन र बसहरू) ले भन्दा बढीको मात्रामा पुगेको छ जुलाईमा १,००० एकाईअटोमोबाईल र ट्रक निर्माणकर्ताहरूको स्प्यानिश संघ द्वारा प्रदान गरिएको डाटाका अनुसार। जसमा यो प्रस्ट छ कि यस निजी साधन यातायातको गत वर्षको तुलनामा 50०% भन्दा बढी बढेको छ। यस वर्षको जनवरी र जुलाई बीचमा, हाइब्रिड सवारीका लागि स्पेनिश बजार 45.395 XNUMX units एकाइमा खडा भयो,
1 समझौता पावर कम्पनीहरू
2 इलेक्ट्रिक कारहरू बढी महँगो छन्
3 २०० चार्जिंग पोइन्ट स्थापना गरियो
4 कसरी लोड गर्ने?
5 तेलको मूल्य बढेको सामना गर्नुपर्‍यो
6 खरीदहरूमा छुट
समझौता पावर कम्पनीहरू
यस ड्राइभि system प्रणालीमा सामेल हुन भर्खरको कम्पनीहरूमध्ये एक एन्डेसा हो जसले यस क्षेत्र भित्रको व्यापार लाइन बढाउने सूत्रको रूपमा इलेक्ट्रिक कारहरूमा धेरै दृढ शर्त लगाउने निर्णय गरेको छ। स्पेनमा, २274 एन्डिसा कर्मचारीहरू यसमा सामेल भएका छन् गतिशीलता योजना, जसले इलेक्ट्रिक यात्री कारहरूको लागि सम्पूर्ण राष्ट्रिय बजारको बिक्रीको लगभग सात प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ। अर्को तर्फ, यस प्रकारको धेरै विशेष सवारी साधनहरूमा पनि अर्को वर्षको रूपमा ठूलो वृद्धि देखिने अपेक्षा गरिएको छ। कम्पनीको नाफालाई प्रभावित गर्ने एक कारक।
जहाँसम्म, तपाई के चाहानुहुन्छ भने यस प्रक्रियाको अधिकतम लाभ उठाउनु हो जुन बिजुली कम्पनीहरूले गुज्रिरहेका छन, यो केहि छिटो यो वास्तविकता बन्नको लागि हुनेछ। अचम्म मान्नुपर्दैन, यी तथाकथित इकोलोजिकल कारहरूको घटनाहरू मा सानो छ व्यवसाय खाता सूचीबद्ध को। तपाइँसँग पनी विकल्प छैन, कम्तिमा केहि अधिक वर्षहरू, तिनीहरूका मूल्यहरू यस परिदृश्यलाई प्रतिबिम्बित गर्न जुन सेट गर्न सुरू भयो। यदि तपाईंसँग अबदेखि धैर्यताको राम्रो खुराक छ भने, यो हुन सक्छ कि पाँच, छ वा सात बर्षमा तपाईंको इनाम हुनेछ यदि तपाईंले यी मानहरू तपाईंको अर्को लगानी पोर्टफोलियो बनाउनको लागि छान्नुभयो भने।
इलेक्ट्रिक कारहरू बढी महँगो छन्
एन्डिसाबाट उनीहरू स्वीकार्छन् "इलेक्ट्रिक कार हासिल गर्नु दहन कार किन्नु भन्दा महँगो हुन्छ, र विशेष गरी यदि तिनीहरू हातले लिथियम ब्याट्रीले सुसज्जित छन् भने"। तर एकै साथ उनीहरूले बुझे कि विद्युतीय सवारीले मध्यम र लामो अवधिमा महत्त्वपूर्ण बचत उत्पन्न गर्दछ, किनकि ईन्धन बचतको अतिरिक्त, मर्मत लागत यो धेरै कम छ। यो कारणले हो कुनै तेल वा स्नेहक छैन, ब्रेक लगाउने कम छ र अन्तमा कुनै यांत्रिक प्रसारणहरू छैनन्। जुनसँग, ड्राइभरहरूको जेबमा प्रभाव तुरून्त छ।
यस अर्थमा, ऊर्जा बचत को एक औसत संकेत गर्न सक्दछ १.० यूरो प्रति १०० किलोमिटर रातमा रिचार्ज गर्दै र एक औसत उपायको रूपमा प्रति १०० किलोमिटर प्रति १ k किलोवाटको उपभोगको लागि। अर्कोतर्फ, यो बिर्सिउन सकिदैन कि त्यहाँ वातावरण लागतमा CO15 उत्सर्जनको परिणामको रूपमा लागत नियन्त्रण छ। जबकि यस वर्गका सवारी चालकहरूको हाल सार्वजनिक सहायता र सब्सिडीका विभिन्न ढाँचाहरू छन् जुन दिगो गतिशीलतालाई बढावा दिने योजनाहरूमा समावेश छन्।
२०० चार्जिंग पोइन्ट स्थापना गरियो
अन्य ठूला बिजुली कम्पनी, Iberrola, पनि यही व्यवसाय प्रक्रियामा जाँदैछ। जहाँ व्यवसाय समूहले शर्त लगाउने निर्णय गरेको छ दिगो गतिशीलता यी सुविधाहरु को वाहन को माध्यम बाट। यस ड्राइभि model मोडलको सबैभन्दा ठूलो योगदान भनेको यो हो कि यसले आर्थिक र नियामक बाधाहरूको कटौतीलाई अनुमति दिन्छ। एक विज्ञप्तिमा उनले औल्याए कि "प्रदूषकले भुक्तानी गर्छ" भन्ने सिद्धान्तमा आधारित नियमन र रिचार्ज पोइन्टहरूको स्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउनु आवश्यक छ "।
यी उद्देश्यहरू पूरा गर्न यसले स्पेनभर २०० वटा विद्युतीय कारहरूको लागि चार्जिंग बिन्दुहरूको नेटवर्क स्थापना गर्न सफल भएको छ, जसलाई विद्युतीय चार्जर भनेर चिनिन्छ। यी जडानकर्ताहरू यसको कार्यान्वयनमा बिभिन्न चरणहरूको साथ प्रक्रियामा देशका राजमार्गहरू र मुख्य कोरिडोरहरूमा वितरित हुन्छन् र ती सिद्धान्तमा २०१२ को अन्तिम महिनाहरूमा अन्त्य हुनेछ। यस नवीन चार्ज प्रणालीको सब भन्दा सान्दर्भिक पोइन्ट्स यो हो कि यसको प्रयोगको सन्दर्भमा तीन तरिकामा विभाजित हुनेछ: छिटो, सुपरफास्ट र अल्ट्राफास्ट। तिनीहरूमा समयको अनुमानको साथ जुन २० र minutes० मिनेटको बीचमा दुबै हुनेछ।
कसरी लोड गर्ने?
अबदेखि यस वर्गको गाडीका चालकहरूले ध्यानमा राख्नु पर्ने अर्को पक्ष विद्युत नेटवर्कमा रिचार्जिंगको अपरेशन हो। ठिक छ, प्रयोगकर्ताहरूले यी विद्युत वितरण केन्द्रहरूमा रिचार्ज गर्न सक्षम हुनेछन्, तर भू-स्थान लिन, रिजर्भ गर्न र उनीहरूको मोबाइल फोनमार्फत भुक्तान पनि गर्न सक्दछन्। बिजुली क्षेत्रका कम्पनीहरूका स्रोतका अनुसार औसत लोडको बिच हुनेछ चार र पाँच यूरो प्रत्येक १०० किलोमिटर। यद्यपि अन्य स्रोतहरूले अनुमान गरे कि ती आउने बर्षहरूमा स्पेनी चालकहरु बीच यसको अधिक स्वीकृतिको परिणामस्वरूप ड्रप हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, यो बिर्सनु हुँदैन कि यी कम्पनीहरूको अनुमान छ कि भविष्यमा प्रत्येक १०० किलोमिटरमा कम्तिमा एक पोइन्ट हुनेछ। यदि त्यसो हो भने, यसको अभ्यासमा अर्थ हुनेछ वर्तमान नेटवर्क नक्कल, यद्यपि यो दृश्यावलोकन आगामी बर्षहरूमा पूरा भइरहेको छ भने हेर्न बाँकी छ। किनकि हाम्रो देशमा यसको रोपण अझै पनि अनिश्चित छ, युरोपियन देशहरूमा के भइरहेको छ त्यसको विपरित, खास गरी पुरानो महाद्वीपको उत्तरमा अवस्थित।
तेलको मूल्य बढेको सामना गर्नुपर्‍यो
त्यहाँ दहन इञ्जिनको साथ कारका सम्बन्धमा धेरै भिन्नताहरू छन्। एउटा विशेष भनेको कालो सुनको मूल्यको बृद्धिसँग सम्बन्धित छ। यस समयमा, उनी पट्टिको बारमा पुगेका छन् Bar a० प्रति ब्यारेल। कम्तिमा छोटो र मध्यम अवधिमा यो बढ्न जारी रहन सक्छ भन्ने अपेक्षाको साथ। यस अर्थमा, अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा एजेन्सी (आईईए) को भविष्यवाणी पर्याप्तता संग पूरा भएको छ, २०२० मा मूल्य कच्चा को एक ब्यारेल .० डलर हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्दै।
स्पेनमा पेट्रोलको औसत मूल्य धेरै नजिक छ १.1,30० युरो प्रति लिटर। यस परिदृश्यको साथ, यो कुनै अचम्मको कुरा होइन कि केही स्थानहरूमा इलेक्ट्रिक कार किन्न अरूको भन्दा बढी लाभदायक हुनेछ। जहाँ, केही क्षेत्रीय रिपोर्टहरूले स्पष्ट गर्छन् कि इलेक्ट्रिक कारहरू मार्फत बचत १०० किलोमिटरमा लगभग .9,5 ..100 युरो पुग्न सक्छ। यी गणनाको परिणामको रूपमा, १०० किलोमिटरको यात्रामा प्रति घण्टा १ k किलोवाटको औसत उपभोगको लागि, यो अनुमानित लागत २ युरोको नजिकै आउँछ, त्यस्तै विशेषका यी कारहरूले प्रदान गरेको न्यूनतमeयूरोको तुलनामा। दायरा
अर्को फाइदा जुन इलेक्ट्रिक कारहरूले प्रदान गर्दछ उनीहरूको दहन सवारीको तुलनामा कम लागत हो। यो तथ्य व्युत्पन्न गरिएको छ किनकि स्पेनी नगरपालिकाको एक राम्रो हिस्सा यसको अधिग्रहणका लागि प्रोत्साहन वा बोनसको श्रृंखला विचार गर्दछ। केहि केसहरूमा तपाईंको करहरूमा 75% सम्म। अर्कोतर्फ, त्यहाँ अन्य थप फाइदाहरू पनि छन्, जस्तै दर्ताबाट पूर्ण छुट। भ्याट्को सम्बन्धमा, यो पूर्ण रूपमा सबै भन्दा बढी परम्परागत गाडीहरूको जस्तै छ। यो, यसैले निर्णय हो कि तपाइँ यी चरहरू के आधारमा बनाउनु पर्छ।
मूल्या aspect्कन गर्न अर्को पक्ष यो हो कि कार पार्कहरूबाट लिइएको जुन कारहरूको यस वर्गको लागि देखा पर्दछ। यो बिन्दुमा तिनीहरू क्रमिक रूपमा शहरी केन्द्रहरू, सुपरमार्केटहरू र यहाँसम्म कि पर्यटन क्षेत्रमा विस्तार भएका छन्। र के अधिक महत्त्वपूर्ण छ, केहि बर्षको विस्तार चरणमा।
अन्तमा, यो ध्यान राख्नु पर्छ कि त्यहाँ मुख्य परम्परागत रिचार्जिंग पोइन्टहरू छन् ताकि ड्राइभरहरूले यस प्रक्रियालाई आरामसँग औपचारिक बनाउन सक्दछन्। यद्यपि यो क्षेत्र अझै विस्तारको चरणमा छ, कमसेकम हाम्रो देशको रूपमा। साथै अन्य रिचार्ज केन्द्रहरू जुन सबै प्रयोगकर्ताहरूका लागि नि: शुल्क छन् र जसले यस क्षेत्रलाई पुनजीवार्जित गर्दछ। र के अधिक महत्त्वपूर्ण छ, केहि बर्षको विस्तार चरणमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » negocios » इलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रिक कार क्षेत्र मा प्रवेश